PlayStation Network အတွက်မြောက်အမေရိကအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနည်း | Gadget သတင်း
PlayStation Network အတွက်မြောက်အမေရိကအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
မင်းသိတဲ့အတိုင်း PlayStation Network console များပေါ်တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်အပြင်ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည် PlayStation, ၏ကို virtual စျေးကွက်ထောက်ခံပါတယ် Sony က, PlayStation Store က၊ အချို့သောအခြေအနေများတွင် - အသံလွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှ - ငှားရမ်းနိုင်သည့်အရာ၊ မြင့်မားသောရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတ၊ music ကို Unlimited- နောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယိုဂိမ်းသတင်းများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့် ၀ ယ်ရန်၊ ကျော်ကြားသော dlcs သို့မဟုတ်သီးသန့်သရုပ်ပြပစ္စည်းများရယူရန်။
ပေမယ့်, တွင်ကမ်းလှမ်းသောအကြောင်းအရာများစွာ၏ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်စျေးနှုန်းများ PlayStation Store က သင်ရှိသည်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအရသိရသည်ကွဲပြား Sony က တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသတွင်း၌တည်၏။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်ပါသောအကြောင်းအရာအချို့ကိုတွေ့ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် PlayStation Store က ဥရောပကိုပေးဆောင်ရပြီးမြောက်အမေရိကမှငွေပမာဏကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကတည်းက Munvi ဗီဒီယိုဂိမ်းများ သင့်အားအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်သင့်အားလမ်းညွှန်ပေးမည့်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည် PlayStation Network ဒါကမင်းကိုမြောက်အမေရိကဈေးကိုသွားခွင့်ပြုမှာပါ။
ပထမ ဦး စွာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ ငါတို့ဒီအကောင့်နဲ့ပေါင်းသင်းလိမ့်မယ် လူကြိုက်များသော Outlook -old Hotmail သို့မဟုတ် Gmail ကဲ့သို့သောများစွာသောပံ့ပိုးသူများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ console မှကျွန်ုပ်တို့သည် user section သို့သွားပြီးအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါမည်။
ယခုငါတို့ menu ၏သွားပါလိမ့်မယ် PlayStation Network ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိမ့်မယ် PlayStation ကွန်ယက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ.
ငါတို့ရွေးသည် အကောင့်အသစ်ဖန်တီးပါ ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှလိုက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလက်ခံရရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်မည့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာနိုင်ငံ ("နေအိမ်") ကို ၀ င်ရမည် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (ယူနိုက်တက်စတိတ်)၊ ဘာသာစကား («ဘာသာစကား») အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အမှတ်အသားပြုလိမ့်မည် အဂၤလိပ္ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်ရှိသောနယ်ပယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားသည့်ရက်စွဲ ("မွေးသက္ကရာဇ်") ဖြင့်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၂၁ နှစ်ကျော်ရန်အကြံပြုလိုသည် - ယူအက်စ်အချို့ပြည်နယ်များတွင်အများစု၏တရားဝင်သက်တမ်းသည်ဤအရေအတွက်မှဖြစ်သည် - ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Accept (လက်ခံ) ကိုပေးခြင်းဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ privacy မူဝါဒနှင့်အခြားသူများကိုလက်ခံမည်။
နောက်အချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အရင်၌ရှိသင့်ခဲ့သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းရပါလိမ့်မည် Session ID (ဆိုင်းအင်နံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ)၊ က စကားဝှက်ကို အကောင့် (စကားဝှက်) နှင့်တစ် ဦး အဘို့ လုံခြုံရေးမေးခွန်း (လုံခြုံရေးမေးခွန်း) သင့်အဖြေနှင့်အတူပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည် (အဖြေ) ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
ငါတို့တောင်းခံရမည် အွန်လိုင်း IDအသုံးပြုသူအသစ်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုသောအမည်ဝှက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမအမည် (နာမည်)၊ နောက်ဆုံးအမည် (surname) နှင့်ဆန္ဒရှိပါကကျား၊ မ (ကျား) ကိုဖြည့်ရမည်။
နောက်တစ်ဆင့်တွင်သင်အကောင့်ဖွင့်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမှန်ကန်သောမြောက်အမေရိကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာကိုထည့်ရမည်။ သင်မှန်သောလိပ်စာကိုရှာဖွေရန်မည်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့မဟုတ် Google Maps သို့မဟုတ် Google Earth ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။
လမ်းလိပ်စာ ၁: နော် ၀ င်း
စီးတီး - ဖလော်ရီဒါ
ပြည်နယ် / ပြည်နယ် - ဖလော်ရီဒါ
ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသည့်အဆင့်တွင်အီးမေးလ်မှတဆင့်အသိပေးချက်များ၏ ဦး စားပေးမှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းလိမ့်မည် Sony က။ သင်အဆင်ပြေသည်ဟုယူဆသောရွေးစရာကိုရွေး။ Continue ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖန်သားပြင်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးအကောင့်ကိုအတည်ပြုပါ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင်ပြီးသားရှိသည် PlayStation Network မြောက်အမေရိက!
သင်၏ access data အားလုံးကိုသင်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည် အနာဂတ်၌ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန် (ID, e-mail, password, လုံခြုံရေးမေးခွန်း, အဖြေ, အမည်, မွေးနေ့နှင့်လိပ်စာ) ။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုမှာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်ထုတ်ပေးသောဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ - သင်အမှားတစ်ခုရလိမ့်မည်။ ကစားသမားများအများဆုံးအသုံးပြုသောအဖြေမှာ ၀ ယ်ခြင်းကိုရယူရန်ဖြစ်သည် PSN ကတ်များ en Amazon.comအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မှန်ကန်သောလိပ်စာတစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ရမည် (မြောက်အမေရိကအကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသောနေရာ) PSNငွေဖြည့်ကတ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းပြီးကဒ်ဝယ်ယူပါ PSN ကတ်များ, ကွဲပြားခြားနားသောပမာဏ၏ Refill နှင့်အတူရောင်းချကြသည်။ ၀ ယ်ယူမှုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေးပို့ခြင်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဖလှယ်နိုင်ရန်သင်ချက်ချင်းကုဒ်ရှိသင့်သည် PlayStation စတိုးအမေရိကန် နှင့်ရန်ပုံငွေများကိုသင်၏ virtual ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ထည့်ပါ (အတွင်း PlayStation Store က, ဘယ်ဘက်ရှိ menu ၏အဆုံးကိုသွား, select လုပ်ပါ ကုဒ်ကိုရွေးပါ သင်ပေးထားသောအရာကိုရိုက်ထည့်ပါ အမေဇုံ)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ဂိမ်းတွေကက » PlayStation Network အတွက်မြောက်အမေရိကအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
yeison brea ဟုသူကပြောသည်
yeison brea အားပြန်ကြားပါ
အကယ်၍ သင်သည်စပိန်တွင်မနေပါကအမေရိကန် PSN တွင်ဂိမ်းများကိုသင်မည်သို့ဝယ်မည်နည်း။
Eivan Torres အားပြန်ပြောပါ
ယောသပ် rmz ဟုသူကပြောသည်
Josseph rmz အားပြန်ကြားပါ
သမားရိုးကျကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Vine နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်နည်း
iOS တွင်နှင့် jailbreak မပါဘဲမည်သည့်စာသားဖောင့်ကိုမဆိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း